जापानको नया युग "रेइवा" | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > NEWS > जापानको नया युग “रेइवा” (令和時代) जापानीज के सोच्छन ?
जापानमा बस्ने हामी सबैमा नया युगको नाम पर्खाइको बिषय थियो। समाचार होस् वा टिभी कार्यक्रम सबै नया युगको घोसणाको खबर पाउन आतुर थिए। हुन पनि अब हेइसेइ (平成）सिद्दिसकेको छ। हेइसेइको अन्त्य संगै नया युगको सुरुवात भैसकेको छ। प्रधानमन्त्रि सिन्जो आबेले प्रेस बिज्ञप्ति दिदै भन्छन, (希望に満ちあふれた新しい時代につながる新元号に) हामीहरु आशाबाट भरिएको नया युग अर्थ्याउने नाम राख्न चाहन्छौ।
त्यति भन्दै नया युगको नाम राखिन्छ “रेइवा” (令和)। यी शब्दमा प्रयोग भएका खान्जीको अर्थ शान्ति र शुव्यवस्था हो।
रेइवा को सुरुवात: 令和時代
एदो युग (सन् १६०३-१८६८) पछिको यो सातौ युग हो। यो नया युग मे मा सुरु हुनेछ जब राजकुमार नारुहितो अहिलेका राजा आकिहितो पछि राजगद्दीमा आउनेछन्। यी युगलाई जापानी भाषामा गेन्गो(元号）भनिन्छ। एउटा गेन्गोले त्यो युगको राजाले गर्ने शाशनकाल जनाउछ। गेन्गो वा युग परिवर्तनलाई जापानमा निकै ठुलो कुराको रुपमा लिइन्छ। नया युगको नाम अधिकारिक डकुमेन्ट, पात्रो, वडा कार्यालय, नगरपालिका, अस्पताल जहाँ तही प्रयोग गरिन्छ।
हेइसेइ (平成) फर्केर हेर्दा
हेइसेइको शाब्दिक अर्थ शान्ति प्राप्ति हो। यो युग जनवरी ८, १९८९ मा राजा हिरोहितोको मृत्यु पछि सुरु भएको थियो। हिरोहितो को युगलाई भने श्योवा युग भनिन्थ्यो। हेइसेइको युगमा जापानमा अर्थतन्त्रको स्थिरता (the lost decades), त्यसपछिको थोरै आर्थिक सफलता, २०११ को महा भुकम्प, त्यसपछिक सालको ठुलो वर्षा र ताईफ़ुनले निम्त्याएको जनधनको क्ष्यतिको लागि सम्झिइने छ।
जापान मात्र एउटा देश हो जसले अझै पनि युगको नाम रख्छा र त्यसलाई अधिकारिक रुपमा चलाउछ। यो चलनको समर्थन वा असमर्थन गर्ने मान्छेहरुको कमि छैन। समर्थन गर्ने मानिसहरु यसले जापानको संस्कृति र परम्परा झल्काउछ भन्ने तर्क राख्छन भने असमर्थन गर्नेहरु अंग्रेजी वर्ष प्रयोग गरे यो नाम सम्झिने र राख्ने दुख हुन्न थियो भन्छन। हुनपनि जापानमा अरु काममा भने अंग्रेजी मिति नै प्रयोग गरिन्छ।
जापानको पहिलो युगको सुरुवात सन् ६४५ बाट भएको थियो। त्यो युग को नाम टाइका थियो। आधुनिक जापानको युग भने मेइजि युगलाई भनिन्छ। मेइजि १८६८ बाट सुरु भएको थियो। मेइजि पछि ताइश्यो , श्योवा , हेइसेइ हुदै अहिले नया रेइवा युग सुरु भएको छ।
एक महिनामा सबै तयारी गरि सकिने र पात्रो पनि नया युग “रेइवा” को हुने जनाइएको छ। जापानीहरु रेइवाले कस्तो दिन लिएर आउने हो भन्ने पर्खाइमा छन्।
रेइवा नाम, मानिसहरु के सोच्छन ?
नाम सार्बजनिक हुनु केहि मिनेट पूर्व मानिसहरु टोकियो, शिबुयाको ट्राफिक इन्टरसेक्सनमा मोबाइलले फोटो खिच्न पर्खेर बसेका थिए। सबै जान शान्त होडिंग बोर्डको टिभी तिर हेर्दै थिए। त्यतिकैमा नाम सार्बजनिक हुन्छ, “रेइवा” , “रेइवा जिदाई”। केहि मानिसमा खुसि देखिन्थ्यो, केहिमा प्रश्न चिन्हको भाव। केहि मानिस रेइवा रेइवा भन्दै कराउदै आफ्नो समर्थन जनाउदै थिए। हेर्न लायक थियो त्यो पल। त्यतिकैमा मैले केहि जापानीलाई सोधे। मैले पाएको रोचक जबाफ हरु :
“यो नाम राम्रो छ। यो नाममा शान्ति छ। अनि लेख्न खान्जी पनि सजिलो। सम्झिन नि सजिलो। मलाई मन पर्यो।”
“कस्तो गह्रौ नाम। एकदम ठोस।”
“कस्तो सुन्दै बच्चाले राखेको जस्तो नाम।”
“नाम जे सुकै होस्, मलाई अब हेइसेइ अन्त्य भैसक्यो भनेर मन भुझाउन धेरै समय लाग्छ।”
रेइवा प्रिन्टको सामानको बिक्रि
नाम सार्बजनिक भएको केहि मिनेटमै, पसलहरुमा रेइवा प्रिन्टको ब्याग, कागज, टि सर्ट, कुकिज बिक्रिमा राखिसकिएको थियो। यसले पनि जापानीहरुमा यो कुराको कत्ति को क्रेज रहेको थाह पाइन्छ। त्यति मात्र नभएर नया “रेइवा साके” (जापानी रक्सि) पनि येही युग को नामबाट निस्किसकेको छ।
हजुर पनि जापानमा हुनु हुन्छ वा आउदै हुनुहुन्छ भने रेइवा प्रिन्टको कोसेली लिन नबिर्सिनु होला।
हजुरलाई यो नया नाम कस्तो लग्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
end of heisei